प्रचण्ड पत्नी सिता दाहालको अवस्था गम्भीर ! - News 88 Post
April 11, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्ड पत्नी सिता दाहालको अवस्था गम्भीर !
काठमाडौं – पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नि सिता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था दिनहुँ बिग्रदै गएको बताइएको छ । उनलाई केही महिना अघि नेपालमा उपचार नहुने भएपछि उनको थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सिता दाहालको काठमाण्डौंको मेडिसिटीमा उपचार समेत गरिएको थियो तर उनको त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि भारत लगिएको थियो । प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराका अनुसार सिताको थप उपचारका लागि यसअघि पनि अमेरिका, सिंगापुर र भारत लगिएको थियो । पछिल्लो समय घरमै आराम गरिरहेकी सिताको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।
पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि पुस २० गत मुम्बइ गएका प्रचण्ड तत्कालै नेपाल फर्किएका थिए । यसपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको अनुमान गरिएको थियो । तर, उनलाई बिरामी अवस्थामै घर फर्काइएको थियो । लामो समयदेखि बिरामी रहेकी दाहाल पत्नी सीता दाहाल थप उपचारका लागि मुम्बइ लगिएको थियो।
यसअघि विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएको सीतालाई पछिल्लो पटक मुम्बइ लगिएको हो । पत्नी सीतालाई उपचारकै क्रममा छोडेर प्रचण्ड स्वदेश फर्केका थिए । प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले फेसबुकमा आमाको सिकिस्त अवस्थाको तस्वीर राख्दै आमा भनेर दुई वटा लभ इमोजी राखेकी छिन् । उनको स्टाटसमा सर्यौ कमेन्टहरु स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आएका छन् । तस्वीरमा दुई छोरीहरु आमासँग देखिन्छन् । सिताको अवस्था तस्वीरमा निक्कै सिकिस्त जस्तो देखिएको छ । सिता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना।
Tagged प्रचण्ड पत्नीसीता दाहाल
आजको राशिफल हेर्नुस र सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गर्नुस्
आज घोडेजात्रा मनाइँदै, यस्ताे छ यसकाे इतिहास
July 22, 2021 N88
एक महिना लकडाउन गर्ने सरकारकाे तयारी, यस्ताे हुने छ अबकाे माेडल
April 24, 2021 N88
जसपामा नयाँ ट्वीस्ट, एकाएक पल्टियाे पासा : तनावमा ठाकुर हारगुहार माग्दै बालुवाटार पुगे
June 4, 2021 N88